सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता 'एमके अग्रवाल'को घरमा प्रहरीको छापा! यस्ता महत्वपूर्ण कागजात फेला
सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता ‘एमके अग्रवाल’को घरमा प्रहरीको छापा! यस्ता महत्वपूर्ण कागजात फेला
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य लगानी एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवालको घरमा प्रहरीले छापा मारेको छ। सुन तस्करी र सनम श्रेष्ठको हत्या प्रकरण बाहिर आएर अनुसन्धान सुरु भए लगत्तै अनामनगरस्थित आफ्नो घरमा ताला पड्काएर फरार भएका अग्रवालको घरमा शुक्रबार प्रहरीले छापा मारेको हो ।
अहिले अग्रवाल भारतमा लुकेर बसेको आशंका गरिएको छ। उनीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरिएको छ। उनी अहिले १९२ देशका इन्टरपोल प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन्। आज सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न गठित समितिले उनको घरमा छापा मारेर निकै महत्वपूर्ण कागजात हात परेको दावी गरेको छ।
सुनसरी जिल्लाको धारन उपमहानगर -३ का स्थायी बासिन्दा रहेका उनलाई अहिले सम्म पक्राउ गर्न सकिएको छैन। यसै प्रकरणमा पक्राउ परेका राप्रपा प्रजातान्त्रिक का नेता भुजुङले दिएको बयानमा गृह मन्त्रालयका सह-सचिव र्इश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको समित समक्ष हराएको साढे ३३ किलो सुनका मालिक मोहन कुमार अग्रवाल रहेको बताएका थिए।
उनले उक्त तस्करीको सुन अग्रवालको रहेको र आफुले पनि तस्करीमा सहयोग गरे वापत कमिसन पाउने गरेको बताएका थिए।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ २५, २०७५१९:१३
अवैध खेसरीको दाल बरामद !